‘जनताका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा काम गर्नेछु’ - Nigranitimes
होमपेज / अन्तरवार्ता / ‘जनताका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा काम गर्नेछु’
‘जनताका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा काम गर्नेछु’
मङ्गलबार, बैशाख २७, २०७९ , निगरानी टाइम्स
समाजले रोजेको, कानेपोखरी गाउँपालिकाले खोजेको एक युवा व्यक्तित्व, युवाहरुको ढुकढुककी अहिले नेकपा एमालेबाट गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदको उम्मेद्वार बनेका छन् । नेकपा एमाले जिल्ला सचिवलाय सदस्य तथा क्षेत्र नं. ३ संयोजक रहेका भोला अधिकारी अहिले चुनावी मैदानमा छन् । उहाँसँग पत्रकार सनम रोक्काले उहाँसँग गर्नुभएको कुराकानीको अंशः
एमालेको विगतको प्रतिवद्धता पत्रको काम पुरा भयो ?
२०७४ सालको चुनावमा नेकपा एमालेले जितेर विकास पुर्वाधारका थुप्रै काम सम्पन्न गरेको छ । यहाँ हिजो कालोपत्रे, कल्भट, बिजुली बत्ती जताततै थिएन, स्वास्थ्य केन्द्रहरु थिएन । यी सवैकाम क्रमश पुरा हुदै गएको छ । विगतका चुनावमा बनाइएको घोषणा पत्रका थुप्रै काम सम्पन्न भएको छ । यो ५ वर्षमा हाम्रो योजना पुरा भएका छैनन । केही पुरा गर्न बाँकी छन ।त्यसका लागि पनि हामीनै आउनुपर्छ । आएपछी गाउँमा बिकासका लहर आउनेछ्न । अहिले हाम्रो ५८ बुदे प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेका छौ । यस प्रतिवद्धता पत्रलाई हामीले पुरा गर्नेछौँ ।
चुनाव जित्नु भयो भने मुख्य प्राथमिकता के लाई दिनुहुन्छ ?
यसमा पनि हामीले सुकुम्बासी समस्या समाधान पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौ । अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि मोरङमानै सबैभन्दा धेरै काम भएको छ । अब फेरी हाम्रो सरकारले विजयी भएर यसलाई पुरा गर्नेछौं । भूमी आयोगमा कानेपोखरीले लागत संकलन, अनुगमन, नापी पनि गरेको छ । अब यो स्थानीय तहको निर्वाचन समाप्ती पछि फेरि सुचारु गर्नेछौं । जुन कामहरु संचालनमा रहेर बाँकी छ । त्यसमा थाती रहेका कामहरु पहिला गर्नेछांै । कृषि र स्वास्थलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने छौँ ।
गाउँपालिका समृद्ध बनाउने तपाईको एजेण्डा के के छ ??
स्वास्थ्यमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण हुँदै छ । अहिले ५ शैयाको २४ सै घण्टाको सेवा संचालनमा रहेको छ । वडावडामा प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रको थालनी गर्ने योजना छ । त्यसलाई पूर्णता दिने पनि प्रतिबद्धता जनाउँछौँ । कृषि क्षेत्रमा किसानहरुको किसानहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछौं । कानेपोखरी अस्पतालमा सुत्केरी गराउने आमाहरुलाई खर्च स्वरुप जनही १० हजार सम्म दिने गरिएको छ ।
जेष्ठ नागरिकलाई बेलाबेला घरघरमा गएर स्वास्थ्य जाँच गर्नेछाँै । कृषि क्षेत्रमा पालिका भित्र नै चिस्यान केन्द्र, भण्डार घर निर्माण गर्नेछौं । कृषि बजारिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नेछाँै । किसानहरुलाई बीऊविजन सहि समयमा उपलब्ध गराउनेछांै । किसानका उत्पादनलाई उचित मुल्यमा बजार व्यवस्थापन गर्नेछौँ । कृषि मेसिनरीहरु औजारहरु खरिद गर्ने, किसानहरुलाई अनुदान वितरण गर्ने योजना छ । सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका निमित विगतमा पनि धेरै कामहरु भए जस्तै वातावरण सफाइ गर्ने, भौतिक संरचना निर्माण ग¥यौँ र अब उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई समाधान गर्नेछौँ ।
यस पटक एमालेले जित्ने आधारहरु के छ ?
कानेपोखरी गाउँपालिका विगतमा साविकको बयरवन, होक्लाबारी र केरौन मिलेर बनेको हो । यो गाउँपालिकामा विगत लामो समयदेखि नेकपा एमालेले विजय हासिल गर्दै आइरहेको छ । नेकपा एमालेको सरकार जनताको दुःख, सुखमा रहेर जनताको घरमा गएर विकास गर्ने सामाजिक संघसंस्था खोल्नेदेखि लिएर त्यसलाई बलियो बनाउने नेतृत्व नेकपा एमालेले लामो समयदेखि गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले जनताले नेकपा एमालेलाई बिश्वास पनि गरेको छ । नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई पटक पटक विजयी पनि गराउनु भएको छ । यो एमालेको बिरासत बोकेको ठाँउ पनि हो । र अब पनि हामिले अवश्य नै जित्छाँै र जित्नेछौं ।
विगतमा तपाईको भूमिका कस्तो थियो ?
म यो क्षेत्रमा लामो समय देखि विद्यार्थीकालदेखि नै अनेरास्ववियु पार्टीका विभिन्न पदमा रहेर काम गरे । विगतका थुप्रै निर्वाचनमा पार्टीले चुनेका उम्मेदवारहरुलाई जिताउने भुमिकामा सशक्त, सकृय रुपमा लागे । र, अहिले मलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाएको छ । खासमा यहाँका विभिन्न संघ संस्थामा बसेर काम गरे । म बिजयी भैसकेपछी जनताका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा काम गर्नेछु ।
हामीलाई अत्याधिक बहुमतका साथ तपाइको अमुल्य मत दिई तपाइको सेवा गर्ने मौका दिनुहोस । विकास निर्माणका अधुँरा कामलाई अघि बढाउँनेछु । संघीयता पछि खासगरी स्थानीय तहमा धेरै अधिकारहरुको प्रत्यायोजन गरिएको छ । यसमा काम गर्नुछ । जनताका आधारभूत आवश्यकताका विषयमा, शिक्षाका सवालमा गाँसवास, कपासका कुरा, समाधान गर्न अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहमा यदि मलाई विजयी गराउनु भयो म आफ्नो बल बुद्धिले भ्याएसम्म जनताका सवालमा दिनरात नभनिकन काम गर्नेछु ।